စျေးနှုန်းချိုသာသောသံမဏိအစိတ်အပိုင်းများစက်ရုံနှင့်ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူများ | Ouzhan
အလူမီနီယမ်အလွိုင်း၊ အလူမီနီယမ်အလွိုင်းအအေးလိပ်ပြား၊ အပူအလိပ်ပြား၊ သွပ်ရည်စိမ်၊ လျှပ်စစ်နှင့်သံမဏိပြား၊ သံမဏိ၊ ကြေးနီပြား။
Sheet metal machining လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် - စိတ်ကြိုက်တိကျစွာသတ်မှတ်ထားသောသတ္တုအစိတ်အပိုင်းများ
ယေဘုယျအားဖြင့်ပြောရရင်အခြေခံပစ္စည်းတွေမှာ Shear Machine, CNC Punching Machine / Laser, Plasma, Waterjet ဖြတ်တောက်စက်, ကွေးစက်နှင့်အမျိုးမျိုးသောအရန်ပစ္စည်းကိရိယာများ - Uncoiling Machine, leveling machine, deburring machine, spot spot welding machine စသည်တို့ပါဝင်သည်။ ပစ္စည်းကိရိယာများနှင့်ထုတ်လုပ်မှုလိုင်းများအပြည့်အဝ။ သင့်အားပရော်ဖက်ရှင်နယ်စိတ်ကြိုက် ၀ န်ဆောင်မှုပေးပါ။
- ပုံနှိပ်ခြင်းနည်းလမ်းသည်ရှုပ်ထွေးသောပုံစံများဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောပစ္စည်းများကိုရရှိနိုင်ပါသည်။ ပါးလွှာသောအခွံအစိတ်အပိုင်းများကဲ့သို့သောအခြားဖြစ်စဉ်များမှထုတ်လုပ်ရန်ခက်ခဲသည်။ အအေးပုံနှိပ်ခြင်း၏အစိတ်အပိုင်းများ၏တိကျမှန်ကန်မှုကိုမှိုကအာမခံသည်၊ ထို့ကြောင့်ရှုထောင့်တည်ငြိမ်မှုသည်ကောင်းမွန်ပြီးအပြန်အလှန်လဲလှယ်နိုင်သည်။
- ပစ္စည်းအသုံးပြုမှုနှုန်းမြင့်ခြင်း၊ ပေါ့ပါးခြင်း၊ ကောင်းမွန်သောတင်းကျပ်မှုနှင့်စွမ်းအင်မြင့်မားမှု၊ ပုံနှိပ်ခြင်းလုပ်ငန်းတွင်စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုနည်းခြင်းတို့ကြောင့်လုပ်ငန်းပမာဏများစွာတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမှာနည်းပါးသည်။
- ရိုးရှင်းသောလည်ပတ်မှု၊ လုပ်အားအင်အားနည်းပါးခြင်း၊ စက်ယန္တရားနှင့်အလိုအလျောက်လုပ်ဆောင်ရန်လွယ်ကူသည်။
Ouzhan OEM မှသံမဏိတံဆိပ်တုံးရိုက်ခြင်းလုပ်ငန်း - တရုတ်ရှန်ဟိုင်းစာရွက်သတ္တုစပ်အစိတ်အပိုင်းများထုတ်လုပ်သူ
Ouzhan သည်စက်ရုံနှင့်ကုန်သွယ်မှုကိုပေါင်းစပ်ပေးသောထုတ်လုပ်သူဖြစ်ပြီးတစ်ကြိမ်တည်းဖြင့်အလှည့်ကျစက်နှင့်ကြိတ်ခွဲစက်ပြုပြင်ခြင်းဝန်ဆောင်မှုများကိုပေးသည်။ ဖောက်သည်များ၏လိုအပ်ချက်များအရသံမဏိအရည်အသွေးမြင့်တိကျသောသံမဏိအစိတ်အပိုင်းများကိုတည်ငြိမ်ပြီးယုံကြည်စိတ်ချရသောအရည်အသွေးရှိသည့်လုပ်ငန်းများကိုလုပ်ဆောင်နိုင်သည်။ ဤစက်အစိတ်အပိုင်းများကိုစျေးကွက်ရှိလူသိများသောတိကျမှန်ကန်သောအစိတ်အပိုင်းများမှရရှိသောအကောင်းဆုံးအရည်အသွေးရှိသောကုန်ကြမ်းများကိုအသုံးပြုသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ခိုင်မာ။ ကျွမ်းကျင်သောနည်းပညာအဖွဲ့နှင့်ထိရောက်သောစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်လည်ပတ်မှုစနစ်သည်စာရွက်သတ္တုပုံနှိပ်ခြင်းဆိုင်ရာစက်ပစ္စည်းအစိတ်အပိုင်းများကိုပြီးပြည့်စုံသောထုတ်လုပ်မှုကိုသေချာစေသည်။ ထို့အပြင်စာရွက်သတ္တုပုံနှိပ်ထုတ်ကုန်များသည်အရည်အသွေးစံနှုန်းများကိုတင်းကြပ်စွာလိုက်နာပြီးအမျိုးမျိုးသောစက်မှုလုပ်ငန်းများတွင်အသုံးပြုနိုင်သည်။ ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့သည်တန်ဖိုးရှိသောဖောက်သည်များအားစာရွက်သတ္တုတံဆိပ်တုံးနှင့်တံဆိပ်ခေါင်းထုတ်ကုန်များအတွက်အပြိုင်အဆိုင်စျေးနှုန်း ၀ န်ဆောင်မှုပေးနိုင်သည်။
၁။ မော်တော်ယာဉ်အစိတ်အပိုင်းများကိုသတ္တုဖြင့်တွန်းထုတ်ခြင်း - အဓိကအားဖြင့်မော်တော်ယာဉ်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာအစိတ်အပိုင်းများ၊ မော်တော်ယာဉ်၏လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုအပိုင်းများ၊ မော်တော်ကားခုံအစိတ်အပိုင်းများ၊ မော်တော်ယာဉ် relay များစသည်တို့ပါဝင်သည်။
2. Sheet metal stamping electronic အစိတ်အပိုင်းများ - အဓိကအားဖြင့်ချိတ်ဆက်ထားသောကိရိယာများ၊ ချိတ်ဆက်မှုများ၊ brush အစိတ်အပိုင်းများ၊ လျှပ်စစ်ဆိပ်ကမ်းများ၊ elastic အစိတ်အပိုင်းများစသည်တို့ပါဝင်သည်။
၃။ အိမ်သုံးပစ္စည်းအစိတ်အပိုင်းများကိုသံမဏိဖြင့်ပြုလုပ်သောအဓိကအားဖြင့်အရောင်ပြွန်အီလက်ထရွန်သေနတ်အစိတ်အပိုင်းများနှင့်အိမ်သုံးပစ္စည်းအသေးများ၊ အမျိုးမျိုးသောဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာအစိတ်အပိုင်းများနှင့်အလုပ်လုပ်သောအစိတ်အပိုင်းများစသည်တို့ဖြစ်သည်။
(၄) IC နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော circuit lead frame သည်အဓိကအားဖြင့် discrete device lead frame နှင့် integrate circuit lead frame များပါဝင်သည်။
Sheet metal stamping motor: အဓိကအားဖြင့် single-phase series motor များ၊ single phase အိမ်သုံးမော်တာ၊ single-shaded pole motor core၊ အမြဲတမ်း magnet DC motor core၊ စက်မှုမော်တာ core နှင့်ပလပ်စတစ် stator core စောင့်ဆိုင်းခြင်းတို့ပါဝင်သည်။
၆။ သံမဏိပြားများကိုလျှပ်စစ်သံမဏိဖြင့်ပုံနှိပ်ခြင်း - အဓိကအားဖြင့် E-shaped transformer cores၊ EI-shaped transformer cores၊ I-shaped transformer cores နှင့်အခြား transformer core ချစ်ပ်များပါဝင်သည်။
၇။ သတ္တုပြားဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောအပူဖလှယ်သည့်ယိုင်များ - အဓိကအားဖြင့်စက်မှုဇုန်အပူဖလှယ်စက်များ၊ အိမ်သူအိမ်သားအပူကူးစက်ယန္တရားများနှင့်မော်တော်ယာဉ်အပူဖလှယ်စက်များပါ ၀ င်သည်။
၈။ သံမဏိပြားနှင့်အခြားအစိတ်အပိုင်းများ - အဓိကအားဖြင့်ကိရိယာတန်ဆာပလာများ၊ အိုင်တီအပိုင်းများ၊ အသံသွင်းစက်နှင့်ကင်မရာအစိတ်အပိုင်းများ၊ ခေတ်သစ်ရုံးသုံးပစ္စည်းများနှင့်နေ့စဉ်စက်ပစ္စည်းများပါဝင်သည်။
၁။ နေ့စဉ်နှင့်အိမ်တွင်းသုံးပစ္စည်းကိရိယာများကိုပုံနှိပ်ခြင်း - အိုးများ၊ အိုးများ၊ စုပ်များ၊ ရေနွေးအိုးများနှင့်အဝတ်လျှော်စက်များ၊ လေအေးပေးစက်များ၊ ရေခဲသေတ္တာများနှင့်ဆန်ချက်စက်များကဲ့သို့နေ့စဉ်သုံးပစ္စည်းများ;
၂။ စက်မှုသုံးသတ္တုတူးခြင်းအစိတ်အပိုင်းများ - ပစ္စည်းကိရိယာကိုယ်ထည်ကိုယ်ထည်၊ မော်တော်ယာဉ်စာရွက်နှင့်အင်ဂျင်နီယာစက်ပစ္စည်းများပုံနှိပ်ခြင်း၊
3. ကျစ်လစ်သိပ်သည်းအစိတ်အပိုင်းများ: ကိရိယာတန်ဆာပလာအစိတ်အပိုင်းများ, connectors, etc ၏ဟာ့ဒ်ဝဲပုံနှိပ်ခြင်း။
၄။ အာကာသ၊ သင်္ဘောနှင့်ရေယာဉ်များအတွက်အထူးတံဆိပ်တုံး။
ရှေ့သို့ အစိတ်အပိုင်းများကို polishing စာရွက်သတ္တုအစိတ်အပိုင်းများ
6016 လူမီနီယံအလွိုင်းအပူကုသမှု CNC စက် ...